Nheyo dzedu dzinotungamirira
yoga zvipfeko jira
Musiyano pakati pemucheka usina mvura, jira rinodzivirira mvura uye jira rinodzivirira mvura
na admin pa 21-10-26
Mucheka usingapindi mvura Kana iwe uchida kugara wakaoma zvachose mukutyaira mvura kana chando, sarudzo yako yakanaka ndeyekupfeka chipfeko chakanyatsogadzirwa chakagadzirwa kubva mumucheka wemvura unofema. Mishonga yakajairika yekudzivirira mvura inoshanda nekuvhara ma pores ne layer ye polymer kana membrane. Kuvhara is a g...
Nzira yekuziva sei polyester uye nylon
na admin pa 21-10-18
Polyester uye nylon zvinoshandiswa zvakanyanya muzvipfeko zvakasiyana-siyana muhupenyu hwezuva nezuva uye zvakabatana zvakanyanya nehupenyu hwedu. Ichi chinyorwa chinoda kusuma nzira yekusiyanisa pakati pepolyester nenylon zviri nyore uye nemazvo. 1, Panyaya yechitarisiko uye kunzwa, machira epolyester ane yakasviba kupenya uye hukama ...
Sumo pfupi yetan kuburikidza nemucheka
na admin pa 21-10-08
Wakamborota here rimwe zuva, wakarara pamhenderekedzo yegungwa wakapfeka sutu yekushambira, wobva wawana ganda rakatsvuka muviri wese pasina mitsetse yakasviba? Iri ndiro jira randinoda kusuma nhasi-tan kuburikidza nemucheka. Kusiyana nejira rejezi, jira redonje repolyester, uye mamwe machira akarukwa, ndinofunga tan kuburikidza nefa...
Chii chinonzi jira rekuruka, uye musiyano uripo pakati peweft newarp?
Kuruka ndiyo nzira yekugadzira machira nekupindirana kweshinda. Saka ingangove seti imwe chete yeshinda inoshandiswa kubva kune imwe nzira chete, iyo inogona kunge yakatwasuka (mu weft knitting) uye yakatwasuka (mu warp knitting). Mucheka wakarukwa, unoumbwa kuburikidza nezvishwe uye stitches. T...
Sumo pfupi nezveDTY polyester
Polyester yakaderera-yakatambanudzwa shinda inodimburirwa seDTY (Dhira Textured Warn), iyo yakagadzirwa nepolyester zvimedu seyakagadzirwa, yakakwirira-yekumhanya inoruka polyester pre-yakatarisana neshinda, uye yozogadziriswa nekunyora twist. Iyo ine hunhu hwepfupi yekugadzira maitiro, kushanda kwepamusoro uye kunaka kwakanaka ....
Machira mana epamusoro anotengeswa zvakanyanya muna 2021, pane yako mhando?
Sezvo isu tichidzidza kuti kune anopfuura zviuru gumi marudzi emachira pamusika. Machira mana anomira pachena nekuda kwemaitiro awo akasiyana. Ngationei kuti ndivanaani. Kutanga, jira renylon Kune spandex nylon jira, nylon spandex underwear jira, nylon spandex leggings jira. Mumakore apfuura, "...
Chii chinonzi pique jira, uye nei chiri sarudzo yakanaka yehembe?
na admin pa 21-09-07
Kutanga, iwe unowanzosangana nematemu akasiyana siyana nemhando dzejira dzaungave usiri kujairana nazvo paunenge uchiongorora akasiyana machira. Iyo pique jira nderimwe remachira asinganyanyi kutaurwa uye pamwe chimwe chinhu chausina kumbonzwa nezvacho, saka tauya kuzopindura mibvunzo ...
Chii chinonzi tricot fabric?
Tricot inobva pashoko rechiito rechiFrench rokuti tricoter, rinoreva kuruka. Tricot jira rine yakasarudzika zigzag chimiro chine manyorerwo kune rimwe divi uye yakatsetseka kune rimwe divi. Izvi zvinoita kuti jira racho rive rakapfava uye zvakare rakasimba kwazvo kune zvemitambo uye zvipfeko zvinoshanda. Kuvakwa kweTricot Fabric Tricot machira...
Chii chinonzi air layer fabric?
na admin pa 21-08-24
Zvishandiso zvemhepo mumucheka zvinosanganisira polyester, polyester spandex, polyester cotton spandex, etc. Isu tinotenda kuti machira emhepo achave akanyanya kufarirwa pakati pevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Kufanana nemachira esandwich mesh, zvigadzirwa zvakawanda zvinoishandisa. Iyo yemhepo layer yejira imhando ye te...
Sarudza yakanakisa yoga jira rako
na admin pa 21-08-16
Yoga imhando yekuzvirovedzera wega ine kuchinjika kwakasimba. Inosimbisa kubatana kwechisikigo uye murume, saka haugone kusarudza zvipfeko zveyoga zvakasununguka. Kana ukasarudza mbatya dzine machira asina kusimba, unogona kubvarura kana kuremara paunenge uchiita maekisesaizi. Izvi hazvingoite chete kuti...
Musiyano uripo pakati peATY jira nemucheka wekotoni
Hunhu hweATY machira. Parizvino, zvigadzirwa zvemachira eATY pamusika zvakanyanya nylon uye polyester. Pakati pavo, polyester ine mukana wakajeka wemutengo. Muchokwadi, mushure memakore mazhinji ebudiriro, machira emakemikari faibha haasisiri zvinhu zvakaderera-magumo uye zvitoro ...
Kuzivikanwa kwemachira e cationic
na admin pa 21-08-03
Chii chinonzi cationic jira? Machira eCationic anogadziriswa neakakosha nzira dzemuviri kugadzira cationic yarn senge cationic polyester shinda kana cationic nylon yarn. Saka nei zvichidikanwa kuita kuti ive cationic warn? Nekuti musika unoda. Cationic yarns yakakwira tembiricha kuramba, saka durin ...
Musiyano pakati pejira risina mvura,...
Mucheka usingapindi mvura Kana iwe uchida kugara wakaoma zvachose mukutyaira mvura kana chando, sarudzo yako yakanaka ndeyekupfeka hanzu yakanyatsogadzirwa yakagadzirwa kubva wat...
Polyester uye nylon zvinoshandiswa zvakanyanya muzvipfeko zvakasiyana-siyana muhupenyu hwezuva nezuva uye zvakabatana zvakanyanya nehupenyu hwedu. Ichi chinyorwa chinoda kusuma nzira ...
PINDA NENHAU DZEDU